Ozakwethu beGoogle abane-Raspberry Pi ukuqalisa umsizi we-Virtual | Izinsiza kusebenza zamahhala
Ozakwethu beGoogle abane-Raspberry Pi ukuqalisa umsizi we-Virtual
Iningi lethu selivele linamadivayisi ahlakaniphile emakhaya ethu alawula wonke amanye amadivayisi ekhaya. Isinongo se-Amazon Echo noma i-Google Home kodwa esomuntu uqobo. Abanye bakhetha ukuthenga idivayisi yabo ku-Amazon noma ku-Google. Kodwa-ke manje kukhona okunye okungenzeka, ithuba elisemthethweni, elilungiselelwe nelikhululekile.
I-Google ijoyine i-Raspberry Pi ekwakheni amaphrojekthi we-Free Hardware. Ngakho-ke, bakhe umsizi wasekhaya ongakwazi ukuzakhela kepha lokho kuzoba nobuchwepheshe beGoogle neRaspberry Pi.
Lo msizi obonakalayo ibizwa nge-VoiceKit noma okungenani kanjena ibizwa ngewebhu lapho sizothola lonke ulwazi lwedivayisi. Le divayisi ngeshwa ingathengwa ngomagazini wakamuva weMagPi.
I-VoiceKit ingumsizi wokuqala wamahhala owenziwe ngokuhlangana phakathi kweGoogle neRaspberry Pi
Lo magazini wenziwe yi-Raspberry Pi Foundation futhi kumagazini wokugcina kufakwe ikhithi yokwakha yalo msizi, okubandakanya izinto ezifana nebhodi lePi Zero W, izipikha, njll.. uzokwazi ukusebenzisa isoftware yakwaGoogle ukuze ube nomsizi osebenzayo osebenzayo futhi ngaphandle kwezinkinga.
Okwamanje, ngokusebenzisa umagazini ukuphela kwendlela yokuthola le khithi yomsizi ebonakalayo. Kepha lokhu kuyinto esivele yenzekile nebhodi lePi Zero futhi ngemuva kwezinyanga siqale ukuyithola ezitolo zeHardware Libre. Ngakolunye uhlangothi iGoogle ikuqinisekisile lokho Le khithi yomsizi ebonakalayo ngeke kube ukuphela kwento engiyethula ngokubambisana ne-Raspberry Pi. Intshisekelo yabo ebhodini ngeqiniso futhi bazoqhubeka nokwethula amaphrojekthi asemthethweni ngesoftware yakwaGoogle neRaspberry Pi Hardware.
Iqiniso ukuthi iMagPi kunzima ukufinyelela kuma-kioski aseSpain kepha futhi kuyiqiniso ukuthi ukuba ne-Free Hardware ne-Free Software, Singazakhela lo msizi uqobo Ngaphandle kwenkinga, yebo, kufanele sibe ngumuntu osebenza kancane ngoba kufanele sakhe ikhithi kuqala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukusajingijolo Pi » Ozakwethu beGoogle abane-Raspberry Pi ukuqalisa umsizi we-Virtual
UDaniel boom kusho
Kuyafana baze baqalise i-android esebenzayo ye-raspberry pi.
Phendula uDaniel Bum
Ngincoma ukujoyina okusajingijolo neNgonyama 2. Ifaka ikhodi kangcono kakhulu futhi ingumphumela omuhle kumaphrinta we-3D
Umsizi weGoogle uza kwi-Free Hardware ngenxa ye-SDK yayo
Abakwa-Edgybees bazothuthukisa amakhono akho okushayela izindiza nge-'game 'elula